Project Prometheus Week #4 update – @mmunited
fundition steemit steempress
Project Prometheus Week #4 update
I will also write this post in burmese language. ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ပို့စ်ရဲ့ payout က 1.72 STU ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Week #3 ထက်စာရင်တော့ ပိုများလာပါတယ်။upvote ကများလာပြီးတော့ comment ကနည်းသွားပါတယ်။ @ptcmyanmar ဆီကနေ ၁၀၀ SP ရထားပါတယ်။ SBI ရှယ်ယာငါးခုရှိပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာကတော့ @kiwibot,@cryptowithincin, @moonbot, @jumbot တွေဆီကနေ တစ်လစာ subscription service ရယူထားပါတယ်။ @minnowpowerup ဆီကနေ ၂၉ ရက် subscription service ရယူထားပါတယ်။ @inconboost နဲ့ @steemit builder ဆီကနေ lifetime service ယူထားပါတယ်။ @accelerator နဲ့ @steem-ua ဆီမှာ SP delegate လုပ်ထားပါတယ်။ အခြား discord upvote service တွေလဲ ယူထားပါတယ်။ နောက်အပတ်ကျရင်တော့2STU ကို မရောက်ရင်တောင်မှ ကပ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
@steempress-io, @dpakyaw,@minnowsupports, @hr1, @minsoenaing, @apoloo1, @mamamyanmar, @myothuzar, @steempress and others.
ရည်မှန်းချက်ကတော့ SP ၅၀၀ အထိ ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို 1 SP လောက်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီ တစ်ပတ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Self-vote မရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကို upvote ပိုမိုပေးနိုင်ဖို့အတွက် Self-vote ကို မလုပ်တော့ပါဘူး။သူများဆီက ချေးပြီး ၁၆၀ Steem ကို vest လုပ်ထားတဲ့အတွက် owned SP က ၂၇၆ SP ဖြစ်သွားပါပြီ။ @steem-ua ကို ၂၅၀ SP အထိ delegate လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Owned/Delegated/Leased 276 100 270
100%/75%/50% 0.00 0.00 0.00
Followers/Following 231 41
Posts/Comments 58 498
Outs/Ins 530 3942
Last7Days 0.20 3.64 3.6306.23
mmunited | Porject Founder | Email :